Hiran State - News: Maxaa ka jira in Isbitaal weyn laga hirgalinayo Hiiraan kedib dhismaha Xarunta agoonta Ugaas Khalif ?.
Maxaa ka jira in Isbitaal weyn laga hirgalinayo Hiiraan kedib dhismaha Xarunta agoonta Ugaas Khalif ?.
Hiiraan:(hiranstate.com)- Waxaa si xowli ah u socda dadaalo loogu gargaarayo amaba looga qeyb qaadanayo xarunta cusub ee Agoonta Ugaas Khalif oo hada dhismaheedu bilaaw yahay, dadaalka ugu badan ayaa waxaa wado dumarka reer Hiiraaan ee ku nool waqooyiga America iyo Yurub oo iyagu isbuuca soo socda uu gurmadkoodii ugu horeeyey uu gaari doono maamulka agoonta sida warar lagu kalsoonaan karo ay sheegayaan.
Rajada laga qabo in lagu guuleysto xarunta dhismahaasi ayaa aad isku soo dareysa iyadoo dumarku doonayaan iney hal mar aamusiyaan baahida guud ee agoonta gaar ahaan meeshii ay caruurtu seexan lahaayeen. caruurtaasi oo ah caruur aad u midab furan oo hadii ay helaan kaalmo dhawrka sano ee inagu soo aadan ayaa iyaguna caawin doona agoonta uga danbeyn doonta xaruntaasi sida ay qaarkood ku fikirayaan mar xog hoose laga aruuriyey dhalinta xaruntaasi.
Marka laga soo tago dhismaha xarunta agoonta waxaa jira warar kale oo sheegaya in la wado qorshe Isbitaal weyn loogu dhisayo magaalda Halgan oo qiyaastii 41 Km dhinaca waqooyi ka xigta Bulo Burte taasi oo iyadu ah magaalo aad u balaaratay oo waliba dhawaantan degmo loo magacaabay. wararku waxey intaasi ku darayaan in howshani ay iska kaashanayaan jaaliyada reer Hiiraan ee qurbaha oo iyagu gaashanayo Somaliweyn.
Isbitaalkani ayaa laga yaabaa hadii lagu guuleysto inuu noqon doono Isbitaalka ugu weyn Hiiraan marka laga reebo Isbitaalka Belet weyne. qorshaha looga hirgalinayo isbitaalkan magaalada halgan ayaa waxey aad wax ugu bedeli doontaa bilicda magaalada maadama duleedka magaalada laga hirgalin doono, sidoo kale Isbitalkan ayaa lagu wadaa in lagu daro qeyb hooyada iyo dhalaanka oo ah mid aad muhiim ugu ahdadka degaankaasi, maadama ay dadka ku nool nawaaxiga Halgan ay yahiin dad aad u badan oo ay hada iyo jeer ku adag tahay iney Isbital u soo aadan Belet weyn.
Jaaliyada qurbaha ee reer Hiiraan ayaa u muuqda iney xooga saarayaan dib u dhiska degaanadii ay ka yimaadeen maadama ay luntay adeegii guud oo ay qaban jirtay dowaladii dhexe ee beri samaadkii ka jiri jirtay Somaliya,sideedaba dalka marka uu bur bur baaxad leh oo dhinackasta leh soo gaaro waxaa dib u dhisi kara jaaliyada ka bad baaday dagaaladaas ee dibadaha nolol ka helay sidaasi daraadeed reer Hiiraan ookaliya dadaalkaan lagama rabo ee waa mid u baahan in shacabka Somaliyeed oo dhan ku baraarugaan ayey leeyahiin inta aragtidoodu wali nooshahay.
· admin on April 18 2011 15:34:35 · 0 Comments · 3147 Reads ·
14,579,671 unique visits